नयाँ प्रधानमन्त्री वीपीजस्तो कि महेन्द्रजस्तो? - विचार - NepalKhabar - Leading online newspaper from Nepal
सन्जय घिमिरे टेक्सास फागुन ५
प्रधानमन्त्री केपी ओली पहिलो कम्युनिष्ट प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीको सालिकमा माल्यार्पण गर्दै
अबको नेपालले आफ्नो सुगन्ध छर्न सक्नुपर्छ बाँकी दुनियाँलाई, अन्यत्रको गन्ध आफैंभित्र गन्हाउने होइन।
उहिले उहिले भनिन्थ्यो र सुनिथ्यो– ‘नेपाली माटो सुहाउँदो।’
अहिले फेरि सुनिन र भनिन थालेको छ– ‘नेपाली माटो सुहाउँदो।’
उहिले उहिले सुनिने नेपाली माटो सुहाउँदो पन्चायतसँग सम्बन्धित थियो। अहिले भनिन र सुनिन थालेको माटो सुहाउँदो कम्युनिष्टसँग सम्बन्धित छ।
यो नेपाली माटो पनि बडो बिचित्रको छ। कहिले पन्चायतसँग सुहाउँछ, कहिले सम्बैधानिक राजतन्त्रसँग सुहाउँछ, कहिले गणतन्त्रसँग।
गणतन्त्र पनि अन्यत्रको जस्तो हो र? नेपाली माटो सुहाउँदो रे! नेपाली माटो सुहाउँदो गणतन्त्रको अभ्यास भएको पनि दश एघार वर्ष नाघिसक्यो। अब फेरि नेपाल, गणतन्त्र भित्रपनि नेपाली माटो सुहाउँदो ‘कम्युनिज्म’ मा प्रवेश गर्दैछ।
सायद २०५२ सालतिरको कुनै दिन हुनुपर्छ, जतिबेला मनमोहन अधिकारीको नेतृत्वमा सरकार बन्दै थियो। त्यतिबेला मेरा प्रिय चिन्तक डा दुर्गाप्रसाद भण्डारीले कम्युनिष्ट सरकारप्रति व्यंग्य गर्दै कान्तिपुर दैनिकको झण्डै पूरा एक पृष्ठमा लेख्नु भएको लेखको शीर्षक थियो– ‘हेमा मालिनीको गालामा झुसे दाह्री।’
त्यती राम्री हेमा मालिनीको गालामा झुसे दाह्री जति अस्वभाविक र असुहाउँदो हो, नेपालमा कम्युनिष्ट सरकार पनि त्यत्तिकै अस्वभाविक र असुहाउँदो हो भन्ने भाव थियो डा साबको त्यतिबेला।
यतिबेला डा भण्डारी अस्वस्थ्य हुनुहुन्छ।
अहिले लेख्न सक्ने भए शायद उहाँले लेख्नुहुँदो हो– ‘हेमा मालिनीको गालामा फेरि झुसे दाह्री।’
तर स्वथ्य र लेख्न सक्ने भएको भए म उहाँलाइ भन्ने थिएँ– ‘सर, अब नेपालमा कम्युनिष्ट सरकार हेमा मालिनीको गालाको झुसे दाह्री रहेन।’
बरु, हेमा मालिनी जस्तै साँच्चिकै सुन्दर र प्रिय पो बन्दै गएको छ पो त।
नेपालमा कम्युनिष्ट सरकार कति र कतिन्जेल सुन्दर र प्रिय रहिरहन्छ, त्यो भने पर्खनु पर्ने विषय हो। यति भने अहिले नै भन्न सकिन्छ– शोले ताकाकी हेमा मालिनी अहिले चाहेर पनि भेटिँदैन। समयले हेमा मालिनीलाई हेमा मालिनी रहिरहन दिँदैन, नेपालका कम्युनिष्टका के कुरा।
यति भनेर अब फर्किउँ फेरि माटो सुहाउँदो तर्फ।
वीपी कोइरालाहरु माटोलाई आत्मा सरह मान्थे। र, त्यसैले भन्ने गर्थे– ‘कुनै द्विविधा भयो भने एक मुठी माटो हातमा लिनु र आत्माले जे भन्छ त्यही गर्नु।’
राजा महेन्द्र ठिक उल्टो थिए। उनी आत्मालाई निमोठेर माटोलाई आफु अनुकुल बोल्न लगाउँथे। आत्मा पनि दबाबमा, माटो पनि दबाबमा।
यसैले वीपीले भन्ने गरेको माटो र महेन्द्रले भन्ने गरेको माटोमा फरक छ। हो, यो माटोको फरक बुझ्न सकिएन भने फेरि पनि नेपाली माटो सुहाउँदो ‘कम्युनिज्म’ नेपालमा नेपाली माटो सुहाउँदो ‘पन्चायत’ जस्तो हुनेछ।
माटोलाई आत्मा मान्ने कि शरीर मान्ने? अहिले प्रसव वेदनामा रहेको ‘नेपाल कम्युनष्टि पार्टी’ र बनिसकेको ओली सरकारले अहिले नै छुट्टयाउन सक्नुपर्छ।
माटोलाई शरीर मानेर आत्मालाई दाश बनाउनेतर्फ लाग्ने हो भने नेपालमा ‘कम्युनिज्यम’ पन्चायत जस्तो हुनेछ। माटोलाई आत्मा र शरीरलाई त्यसको सहायक मानेर अगाडि बढ्ने हो भने प्रसव वेदनामा रहेको ‘नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी’ र बनिसकेको ओली सरकारले सार्थकता पाउनेछन्।
खासमा त, अबको समय नेपाली माटो सुहाउँदो ‘कम्युनिज्म’ वा अरु कुनै सिद्धान्तको होइन, नेपाली माटो सुहाँउदो विकासको हो। खासमा, अति आदर्शवादी शब्दका सिद्धान्तका दिन अब सकिएकै हुन्। यो समयले हामीलाई बढी आदर्शवादी र कट्टर ‘शब्दवाला–सिद्धान्तवादी’ हुनै दिँदैन। एउटा आइफोनको आइडियाले वा एउटा फेसबुकको आविष्कारले विश्व समाजलाई हल्लाइदिने यो समयमा कहाँ रट्दै आएका पुराना शब्दवाला सिद्धान्तहरु काम लाग्छन र जतिसुकै माटो सुहाउँदो भनेपनि?
हुनत, नेपाल सिद्धान्तको राजनीतिबाट होइन, नाराको राजनीतिबाट बर्षौंदेखि आक्रान्त भएको देश हो।
शब्दवाला सिद्धान्तहरु त कहाँ, कहिले खराब थिए र?
कार्यान्वयन गर्नु नपर्ने सिद्धान्त च्यापेर बसेर पो। सिद्धान्तलाई माटो सुहाउँदो बनाउन र भनाउन खोज्ने तर आफुहरु भने माटो सुहाउँदो हुनु नपर्ने। आफुहरु चाहिँ कहिले दिल्लि सुहाउँदो, कहिले बेइजिङ सुहाउँदो, कहिले ब्रसेल्स वा वाशिंगटन सुहाउँदो हुने, सिद्धान्त भने माटो सुहाउँदो भएको गुड्डी हाँक्ने।
भो, अब यो चाहिएन।
माटो सुहाउँदो सिद्धान्त हुन, पहिले आफु माटो सुहाँउदो हुन जान्नुपर्छ। कठै, तिनका हावभाव, काम गराई र व्यवहारमा अलिकति पनि नेपाली माटोको गन्ध छैन। तिनमा ह्वास्स गन्ध आउँछ, अन्यत्र कतैको।
यसैले, माटो सुहाउँदो शब्दवाला–सिद्धान्तलाई आधार मानेर वा त्यसैलाई सम्झेर वा रटेर सरकार चलाउनुको अब खासै अर्थ रहँदैन।
आजको दुनियाँमा प्रविधिको यसरी विकास भैरहेको छ कि भोली के हुन्छ कसैले भन्न सक्दैन। अबका दश बीस वर्षमा यो दुनियाँ अझ् अर्कै भैसक्नेछ।
खासमा त प्रधानमन्त्री ओलीले हिजोको सिद्धान्त र अति आदर्श होइन, भोलीको रोबर्टलाई सम्झेर पो सरकार चलाउनु पर्नेछ त।
प्रधानमन्त्री ओलीज्यु, पत्रकारिताका सन्दर्भमा एकाध पटक भएका भेटहरु बाहेक तपाईंसँग मेरो कुनै दोहारो चिनजान छैन। तर मलाई किन किन तपाईंको ‘बोल्डनेश’ शैली र एकखालको स्पष्टता प्रिय लाग्छन्। झन् जब मेरो श्रीमती तारा रावलले तपाईंसँग अन्तर्वार्ता लिन जाँदा तपाईंको मुखबाट नारायण गोपालका गीतहरु पनि सुनेर फर्केको सन्दर्भ सुनाउँछिन्, मलाई तपाईंको ‘डाइनामिजम’ झन् प्रिय लाग्छ।
ती सबै सक्कली नै हुन कि नक्कली हुन्, त्यो भने अझै मैले छुट्टयाइसकेको छैन। भगवानले कृपा गरुन, तपाईं जस्तो देखिनु र सुनिनु भएको छ त्यस्तै हुनुस् र रहन सक्नुस्।
टाढाबाट मेरो आग्रह छ– नेपालको माटो सुहाउँदो नेपाल होइन, विश्व सुहाउँदो नेपाल बनाउन तर्फ लाग्नुस्, प्रधानमन्त्रीज्यु। मेरो आग्रह छ– नेपाली माटो सुहाउँदो नेपाली होइन, विश्व सुहाउँदो नेपाली बनाउनतर्फ लाग्नुस्।
प्रकाशित ५ फागुन २०७४, शनिबार | 2018-02-17 12:05:32